Outbrain: chii ichocho | ECommerce nhau
Iwe unogona kunge usina kumbonzwa nezve Outbrain kare, kana kuziva kuti chii. Nekudaro, ndeimwe yemapuratifomu ari kubudirira pasi rese, kunyanya nekuti tiri kutaura nezve chishandiso chekukurudzira zvirimo uye kuwana mabhatani uye makomendi.
Asi, Chii chinonzi Outbrain? Ndechei? Inogona kunge iri fomu yehurongwa hwemukati kuti uwane vaverengi vakawanda. Tinokutsanangurira zvose.
1 Chii chinonzi Outbrain
2 Nei uchifanira kushandisa Outbrain
3 Maitiro ekushandisa Outbrain
4 Nzira yekubudirira sei pachikuva
Chii chinonzi Outbrain
Outbrain inozvitsanangura sea kurudziro chikuva chaune manhamba ekuti uwane mibairo nezve kudzvanya uye huwandu hwekurudziro izvo zvavakakupa kune izvo zvemukati zvawakagovera.
Mune mamwe mazwi, tiri kutaura nezve chishandiso chaunogona kukurudzira zvirimo uye nekukubvumidza iwe kuti uwedzere huwandu hwevashandisi vanouya kupeji rako vachigadzira zvakatonyanya kubatsira (iwe uchave netraffic yakawanda uye vateereri vakawanda kuti vatarise).
Iye zvino inoshanda neakanyanya kukosha edhidhiyo kutenderera pasirese seSky nhau, CNN, Fox News, Inonzwa ... Uye, kunyangwe iyo isati yavhurwa kuSpain, chokwadi ndechekuti izvi hazvireve kuti haigone kushandiswa kuwana yakawanda traffic.
Nei uchifanira kushandisa Outbrain
Kune vanhu vazhinji vangave vachizeza kushandisa rudzi urwu rwechishandiso nekuti hachinyatso zivikanwa kuti chinogona kukuvadza kana kubatsira SEO uye nekumisikidzwa kwepeji.
Zvinoenderana ne Moz kudzidza, iyo Outbrain chikuva Ndiyo inoburitsa huwandu hukuru hwemapeji ekuona pamushandisi, uye zvakare yakaderera bounce rate. Ndiko kuti, unogona kuwana mhedzisiro iri nani pane nemamwe mapeji.
Humwe hunhu hwainomira nayo imhaka yekuti vane hanya zvakanyanya nekupa mhando uye kukosha zvemukati, chero zvichidzidzisa kana kuvaraidza. Kana aya marudzi ezvinyorwa akatumirwa, anenge agara achigamuchirwa, uye kwete izvozvo chete, asi anogona zvakare kugadzira 40% yakawanda kubatanidzwa pane yakajairwa kukwidziridzwa kana kushambadza, kusanganisira nguva yakareba yechikamu (kusvika katatu kupfuura).
Kune izvi iwe unofanirwa kujoina chikamu chevateereri. Uye ndezvekuti kana chinyorwa chikatumirwa, hachisvike "chero boka revanhu", asi chete uye chete kune avo vanogona kunyatsofarira. Kuti vaite izvi, vanotarisisa vashandisi uye kudzidza mhando yezvinyorwa zvavanowanzo ongorora mumwedzi ichangopfuura kuti vape iwo mhando yezvinyorwa. Uye ndezvekuti ivo vane algorithm ine makumi matatu akasiyana kuti vakwanise kupa vashandisi izvo zvakanakisa zvemukati uye, panguva imwe chete, ivo vanopa makambani chishandiso chinoshanda sezvo ichisvika kune avo vavariro.
Chekupedzisira, imwe mukana uyo mamwe mapuratifomu haana kugona kuratidza manhamba, asiwo kuchinjana mazano pakati pemablog.
Maitiro ekushandisa Outbrain
Kutanga kushandisa Outbrain chinhu chekutanga kuita Iwe unofanirwa kuisa webhusaiti yavo uye ipapo kunyoresa account kuti uishandise. Ramba uchifunga kuti Outbrain ine akati wandei sarudzo, asi ine yemahara vhezheni uye mamwe akabhadharwa mavhezheni. Kana ukashandisa yemahara unogona kuyedza kana zviri izvo zvawanga uchitsvaga.
Kana wangobatanidza, unogona kunyoresa bhurogi rako kana peji. Kuti uite izvi, unofanirwa kuenda ku "Add a blog" sarudzo. Pano iwe uchafanirwa kusarudza kana iwe waisa iyo yepuratifomu widget, sarudza chikuva chako (kureva, kwainoitirwa kana neCMS yaunayo blog yako), url, mutauro, uye rudzi rwekurudziro (yakanakisa yakaita sechigunwe, sezvo ichinyanya kuona). Izvo zvakakosha kuti iwe uise iyi widget pane yako blog kana peji kuitira kuti ishande nemazvo kana, kana zvisiri, inopa kukanganisa.
Paunenge wangoita zvese, uye wagamuchira zvirevo uye mamiriro esevhisi, unozongofanidza kudzvanya bhatani rekuenderera.
Mushure meichi nhanho, chinhu chega chasara kuita kuenda kuchikamu chekugadzira chepeji rako, uye tarisa kuti widget iri kushanda. Izvi zvinobvumira puratifomu kuti igare ichiona zvitsva zvemukati uye kugona kuzviratidzira. Asi chenjera Nekuti panguva imwe chete yaunomurega achigovera zvirimo, iwe unozovewo mudziyo waunogamuchira zvemukati kubva kune vamwe.
Izvi zvinogona kugadziridzwa, kupinda Outbrain, mune Manage mablogiki / kuseta chikamu, unogona kuzvigadzirisa kuti ubatanidze saiti yako nezvimwe zvine hukama, kuitira kuti ingobatanidza saiti yako kana kuti isaratidze kurudziro. Chero zvaunenge wafunga, unofanira kudzvanya Sevha marongero kuitira kuti anyorwe.
Nzira yekubudirira sei pachikuva
Kana ukafunga kuzviedza, kana iwe uchida chaizvo kubudirira nazvo, zvakakosha kuti uzive nzira yekukwezva vateereri vauri kutsvaga uye kuti vanokutevera. Izvi, zvinoita sezviri nyore, hazvisizvo. Naizvozvo, pakati pemazano atinogona kukupa, ndeaya:
Ronga zvinangwa. Zvimwe zvinobatika kuitira kuti mushandirapamwe wako uve nebudiriro yauri kutsvaga. Zvichienderana nezvinangwa izvi, unofanirwa kusarudza zvirimo. Semuenzaniso, kana iwe uchida kugovera chinyorwa nezve vanhu vakuru uye vateereri vako vari vechidiki, hazvingaite.
Sarudza kuti vateereri vako ndevapi. Izvi zvakakosha kutsanangura uchifunga nezve general. Ndiko kuti, yepeji rako rese, ndiani anonangwa nevateereri? Uye zvichibva pane izvo zvemukati zvekugovana, ndiani angave? Neiyi nzira iwe unozokwanisa kuita zvirinani kuganhura chiyero chenzvimbo, rudzi rwechishandiso, zera, nezvimwe.
Sarudza zvemukati mako. Tichifunga nezvese zviri pamusoro. Kana ukasarudza zvisizvo, mushandirapamwe wako uchange usisina basa. Imwe kurudziro yatinoita ndeyekuti usasiye mavara aunoisa zvishoma, kana foto. Zvinhu zviviri izvi ndizvo zvinogona kukwezva vaverengi uye saka zvinokurudzirwa kutora nguva yako kusarudza izvo zvakanakisa.
Tevera. Izvo zvakakosha kuti utarise kune ruzivo usati watanga danidziro yako sezvazviri mushure, kuongorora kana wanga wakarurama, kana wanga wakanganisa, nezvimwe. uye wozokwanisa kugadzirisa zvese.
Chishandiso pachacho chinotora nguva shoma kuti uwane mhinduro, saka hazvina kukodzera kungoita bvunzo uye wapedza. Zvakanakisisa kuedza kuipa nzvimbo ine mwero kuti uone kufambira mberi uye kana chiri chaicho chishandiso chawanga uchitsvaga.
Wakamboziva here Outbrain? Unofungei nezvake? Uchaishandisa here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Outbrain: chii ichocho
Maitiro ekuita mari paTikTok